Ogaden News Agency (ONA) – Dowlada Maraykanka oo Dadkeeda Uga Digtay Aaditaanka Itoobiya.
Dowlada Maraykanka oo Dadkeeda Uga Digtay Aaditaanka Itoobiya.
Posted by Dulmane	/ February 16, 2018
Safaarada Maraykanka ee wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa digniin culus kasoo saartay umuuraha qaska iyo qalalaasaha ah ee kasocda wadanka Gumaysiga Itoobiya, kuwaas oo hada heer khatar ah gaadhay.
War qoraal ah oo kasoo baxay safaarada dowlada Maraykanka ee magaalada Addis Ababa ayaa siwayn loogu dilay dadka American ka ah ee kudhaqan wadanka Itoobiya, waxaana qoraalka safaarada lagu sheegay in muwaadiniinta Maraykanka ah ee Itoobiya kusugan looga baahan yahay taxadar aad ubadan.
Safaarada ayaa muwaadiniinta Maraykanka ah kacodsatay in ay joojiyaan dhamaan safarada ay kukala bixinayaan Dagmooyinka iyo Gobolada wadanka, waxayna safaaradu dadkeeda kacodsatay in ay wadanka iskaga baxaan sida ugu dhakhsaha badan inta kahoraysana ay kusugnaadaan goobaha ay dagan yihiin.
Safaarada ayaa sidoo kale dadka Amarican ka ah ee doonaya in ay Itoobiya usoo safraan uga digtay in ay wadankaas yimaadaan wakhti xaadirkan, waxayna safaaradu dadkeeda kulatalisay in ay safaradooda dib u dhigtaan ilaa iyo wakhti kale oo la isku halayn karo laga gaadhayo.
Dowlada Maraykanka ayaa dhowr jeer oo hore digniin kasoo saartay safarada wadanka Itoobiya ay kutagayaan muwaadiniinteeda, wuxuuna maraykanku digniinaha isdaba jooga ah bilaabay kadib markay wadanka Itoobiya ka bilowdeen mowjadaha kacdoonada ah.
Sidoo kale waxaa dadkooda uga digay in ay Itoobiya usafraan dowlado badan oo ree galbeed ubadan kuwaas oo ay kamid ahaayeen Ingiriiska, Jarmarka, Norway, Swedan, Canada iyo Austaralia, kuwaas oo dhamaantood kadigay khatarta kudayran wadanka Itoobiya.